कस्तो छ गुल्मीका सबै स्थानीय तहले लागु गर्न लागेको मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी एउटै कार्यविधी? – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/कस्तो छ गुल्मीका सबै स्थानीय तहले लागु गर्न लागेको मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी एउटै कार्यविधी?
कस्तो छ गुल्मीका सबै स्थानीय तहले लागु गर्न लागेको मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी एउटै कार्यविधी?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ पुष २३, सोमबार १६:५० मा प्रकाशित
२३ पौष, गुल्मी । गुल्मीमा मदिरा नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहमा एउटै कार्यविधि लागु हुने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का छ वटा स्थानीय तहमा मदिरा नियन्त्रणको लागि एउटै कार्यविधि लागु गरिने भएको हो । जसका लागि इस्मा गाउँपालिकाले बनाएको मदिरा नियन्त्रण कार्यविधी र कानुनलाई अध्ययन गरेर अन्य स्थानीय तहले पनि कार्यविधी बनाउने निर्णय भएको मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।
सामाजिक बिकासका बारेमा बोल्दै मदाने गाउँपालिका प्रमुख दान बहादुर केसीले खुल्ला सिमाना र नियममा बिबिधता भएका कारण मदिराले प्रश्रय पाउने भएकाले एउटै कार्यबिधीको आवश्यक रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक दिपक कुमार बस्नेतले मदिराका कारण समाजमा घटेका घटनाको बारेमा जानकारी गराए । स्थानीय तहले कानुन बनाए समुदाय र प्रहरी मार्फत मदिरा नियन्त्रण सजिलै गर्न सकिने बताए ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले गुल्मी क्षेत्र नं २ का सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको भेला गरेको छ । भेलामा क्षेत्र नं २ का दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सवै वडाका वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको भेला आयोजना गरिएको हो । यो नेपालका स्थानीय तहमा नयाँ अभ्यासको शुरुवात गरिएको आयोजकको दावी छ । भेलाको प्रमुख उदेश्य स्थानीय तहको काममा एकरुपता ल्याउने रहेको धुर्कोट गाउँपालिकाका उपप्रमुख शिव बहादुर खत्रीले बताए ।
यस्तै प्रकारका भेला प्रत्येक स्थानीय तहले अव पालैपाले संचालन गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरु सहितको भेलाले भेटघाट, एक अर्काका कामको समिक्षा र अनुभव आदान–प्रदान साथै योजना निर्माणका विषयमा समेत फाइदा हुने धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधु घिमिरेले बताए ।
भेलाले जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगतका सबै स्थानीय तहमा करको दर र दायरामा एकरुपता ल्याउने निर्णय गरेको छ । जसको लागि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको समेत सहभागिता रहने गरी रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्दा र बजेट विनियोजन गर्दा सुझाव संकलनको लागि स्थानीय तहका योजना शाखाका प्रमुख सदस्य रहने गरी रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत शंकर प्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्लामा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जसका कारण उत्पादनमा समेत बृद्धि भइरहेको छ । तर बजारीकरणको समस्या रहेको किसानहरुको गुनासो आउने गरेको छ । सोहि कुरालाई मध्ये नजर गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण गर्नको लागि क्षेत्र नं २ का स्थानीय तहहरुबिच एकरुपता ल्याउने निर्णय भेलाले गरेको छ । जसको लागि स्थानीय तहका आर्थिक विकास समितिका संयोजकहरुको सदस्य रहेन गरी मुसिकोट नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक प्रकाश काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
मालिका गाउँपालिका प्रमुख रित बहादुर थापाले छिमेकी स्थानीय तहबिच काम र नियममा एकरुपता भन्दा दम्भ भएका कारण समस्या भएको बताए । उनले बेला–बेलामा स्थानीय तहबिच यस्तै भेला मार्फत सामुहिक छलफल र सहकार्य भए एउटा स्थानीय तह मात्रै नभएर समग्र क्षेत्र र जिल्लाको बिकास सम्भब रहेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पुर्वाधार, सुशासन र क्षमता बिकासमा एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारीकरणको चुनौतिलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसङको समन्वयमा पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो पूर्वाधार निर्माण भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले कर बिना राज्य संचालन हुन नसक्ने भएकोले कर अनिवार्य रहेको बताए । तर जनताले कर तिरे अनुसारको सेवा–सुविधा दिन स्थानीय सरकार गम्भिर बन्नु पर्नेमा जोड दिए । इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले जनताले सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धि खोजेकाले आफुहरु त्यसमा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए ।